[I-Aurora] I-Seascape/Projection/Mahjong/Eduze kwaseSilver Beach/Overseas Port/High-rise Seaview Amagumbi okulala amabili, I-Tram Welfare - I-Airbnb
[I-Aurora] I-Seascape/Projection/Mahjong/Eduze kwaseSilver Beach/Overseas Port/High-rise Seaview Amagumbi okulala amabili, I-Tram Welfare
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-凯娜
U-凯娜 Ungumbungazi ovelele
Sawubona, nginguKaina, ngisebenza embonini yenkonzo nomyeni wami
Sengihambe izindawo eziningi, futhi ekugcineni ngakhangwa abantu baseNorth Sea ngahlala.Ngavula le ndawo yokuhlala ngethemba lokuthola abangane abavela kuwo wonke umhlaba.Isiphetho esilula kufanele saziswe, futhi imizwa yeqiniso okwangempela.
Igumbi, abangani abathathu noma ababili, ukudla, imfudumalo engenakubalwa
Ngethemba ukuthi ikhaya lethu lingaletha uthando lweqiniso nemfudumalo kuwe kude ♥
Indawo ohlala kuyo ngalesi sikhathi i-Golden Coast Avenue [Magnolia], Yinhai District, Beihai. Isitayela esimpunga sizokunikeza umuzwa omuhle kakhulu wokuhlala. Amakamelo amabili okulala afudumele (amagumbi okulala angu-2, igumbi lokuhlala elingu-1, amagumbi okugezela angu-2, ukuzimela ikhishi, yokugezela) zonke izinhlobo izinto zasekhaya kufanele kufakwe. Inama ngokugcwele, kulula kakhulu ilondolo kanye nezakhiwo zamahhovisi ukupheka, kuba ezifanele kakhulu sokuba nomkhaya nabangane kubutsela ndzawonye travel. I-balcony enkulukazi enokubukwa kolwandle, ukuhamba ngemizuzu eyi-10 (amamitha angu-800 emugqeni oqondile) ukuya e-Yintan, kanye nomgwaqo wokudla oqhele ngekhilomitha elingu-1 ukusuka kuwe - Qiaogang Style Street, ehlanganisa ndawonye ukudla okulula okukhethekile kwe-Guangxi ne-Vietnamese, amanzi anoshukela. , kwasolwandle, Ingulube Iqupha Noodle, konke ukudla ufuna ingatholakala lapha!
Kunendawo yokupaka phambi komphakathi (indawo yesitolo sakwa-Heisen) Ungakwazi ukuqasha imoto kagesi ukuya kunoma iyiphi indawo ofuna ukuya kuyo futhi iphumele kwesokunxele → kunezitolo zokunyathelisa, izitolo ezilula, dumpling zokudla, Lanzhou noodle, igazi duck vermicelli isobho, ukudla okulula abahlukahlukene ezifana pancake, izithelo, futhi Shanghai Shengjian nazo ziyatholakala Senhe Isuphamakethe (okungaba ukuhlangabezana izithelo eziyisisekelo, imifino, futhi inyama supply), eduze ATM Agricultural Bank, futhi uhambo lwetekisi lwemizuzu emi-3 ukusuka e-Wanda Plaza Yindawo ekahle yokubuka amafilimu nokudla.
Sawubona, igama lami nginguKaina futhi ngisebenza embonini yezinsizakalo. Ngivamise ukuthanda ukuhamba, ukulalela umculo nayo yonke inhlobo yezemidlalo, ngangivame ukuhamba izindawo ezingenakubalwa nomyeni wami, futhi ekugcineni ngagcinwa ngamasiko aseBeihai, ngakho nganquma ukuhlala eBeihai. e ithemba lokwenza abangane. Ngithemba ikhaya lami kungaletha ukufudumala kuwe kude. Amakamelo okulala amabili, amagumbi okugezela amabili, ama-square metres angama-90, ukubukwa kolwandle okungavinjelwe
Umbhede omkhulu ongu-1, 1 umbhede oyidabuli omncane
4.91 · 105 okushiwo abanye
Siyakwamukela ku-Hi~, Guangdong South Road. Kunamasethi amaningi alolu hlobo lwegumbi. Uhlobo lwefulethi, umumo kanye nomthelela wokubuka ulwandle kuyefana. Ifenisha yangempela ihluke kancane engxenyeni yesithombe. Indawo ohlala kuyo ngalesi sikhathi i-Gold Coast Avenue [Gold Coast], Yinhai District, Beihai. Ihlotshiswe ngesitayela sasolwandle esisha, esikunikeza umuzwa wokuhlala omuhle kakhulu. Igumbi lokulala elifudumele elinamagumbi amabili (2 amagumbi, igumbi lokuhlala elingu-1 , ikhishi ezimele, yokugezela) kanye izinto ezahlukene yasendlini kuyinto ozenza atholakale futhi kulula kakhulu ngoba ilondolo kanye nezakhiwo zamahhovisi ukupheka, okuyinto kakhulu efanelekayo umndeni nabangane kubutsela ndzawonye travel. I-balcony enkulu enombono omkhulu, enomugqa wokuqala wokubuka olwandle, ukuhamba kwemizuzu eyi-10 (ibanga lomugqa oqondile wamamitha angama-800) lingafinyelela "olwandle lokuqala emhlabeni" - iSilver Beach, kanye nomgwaqo wokudla u-1 km kude. kusuka kuwe - Qiaogang isitayela Street, okuletha ndawonye Guangxi kanye okukhethekile Vietnamese Ungadla, umbhubhudlo kwasolwandle, ingulube Trotter noodle, konke ukudla ufuna ingatholakala lapha!
Kusempambanweni yomgwaqo uGuangdong kanye neGold Coast Avenue esifundeni saseYinhai, ngesikhathi seGold Coast, amamitha angama-800 ukusuka eSilver Beach kanye namamitha ayi-1,000 ukusuka eWanda. Ukuhamba esikhumulweni sezindiza:
I-Beihai Fucheng Airport iqhele ngamakhilomitha angama-25.
Kuthatha imizuzu engu-30 ukuthatha itekisi (Isikhumulo Sezindiza sase-Fucheng, Umgwaqo Omkhulu Wekilasi Lololiwe I-North, i-Yintan Avenue, i-Golden Coast Avenue), futhi imali yokugibela ingaba ngu-67 yuan.
Kusukela esiteshini sesitimela:
I-Beihai Railway Station iqhele ngamakhilomitha angu-5.
Imizuzu engu-1.15 ngetekisi (Zhanbei Road, Guangdong Road, Golden Coast Avenue)
2. Ibhasi lithatha imizuzu engama-40 (liphuma esiteshini, liya kwesokudla futhi lifika esiteshini samabhasi sikaloliwe, lithathe ibhasi elinguNo. 22, lidlule ezitobhini eziyi-11, bese lehla esiFundeni Sesibili sase-Wanquan
Isuka esiteshini samabhasi eNanzhu
Isiteshi Sebhasi saseNanzhu siqhele ngamakhilomitha ayi-10. , Kuthatha imizuzu engu-20 ukuthatha itekisi (iNingizimu, i-Avenue, i-New Century Avenue, i-Shanghai Road, i-Jiangsu Road, i-Guangdong Road, i-Golden Coast Avenue) futhi imali yokugibela icishe ibe ngu-28 yuan.
Ukusuka ku-International Terminal:
Kuwuhambo lwemizuzu engu-8 ukusuka e-International Pier kanye nohambo lwemizuzu engama-20. I-Didi Express ibiza cishe ama-yuan angu-8.
Uhambo lwemizuzu eyi-10 (ibanga lomugqa oqondile wamamitha angu-800) lungafinyelela "olwandle lokuqala emhlabeni" - Silver Beach, kanye nomgwaqo wokudla oqhele ngekhilomitha elingu-1 - Qiaogang Style Street, ehlanganisa ndawonye ukudla okulula okukhethekile kwase-Guangxi naseVietnam, ushukela namanzi, kwasolwandle, Ingulube Trotter noodle, konke ukudla ufuna ingatholakala lapha
1. Kuqhele ngamamitha angu-800 ukusuka e-Beihai Silver Beach, imizuzu emi-5 ngemoto
2. Kungamakhilomitha angu-1.2 kanye nemizuzu emi-3 ukushayela usuka ku-Qiaogang Style Street. 3. Kuqhele ngamakhilomitha angu-9 ukusuka e-Beihai Old Street, uhambo lwemizuzu engama-25, kanti izindleko ze-Didi zingamayuan angama-25.
4. Kuqhele ngamakhilomitha angu-3.5 ukusuka efasiteleni lolwandle, kanti izindleko ze-Didi zingamayuan angu-10.
5. Ibanga lokuya emhlabeni ongaphansi kwamanzi lingamakhilomitha angu-8.7, kanti izindleko ze-Didi zingamayuan angu-25. 6. Kuqhele ngamakhilomitha angu-11 ukusuka e-Guantouling, kanti izindleko ze-Didi zingamayuan angama-20.
Zihlole ngokwakho kuyo yonke inqubo, faka i-oda lolwazi lwegumbi, futhi ungene ngaphandle komkhawulo wesikhathi
2. Kungamakhilomitha angu-1.2 kanye nemizuzu emi-3 ukushayela…
U凯娜 Ungumbungazi ovelele